Colorado Potato Beetle - Ahụhụ Na-eguzogide Ahụhụ Ahụhụ - Potatoes News
Colorado nduku ebe - akara na-eguzogide ọgwụ ahụhụ
Colorado Nduku Ebe (CPB) ka bụ nọmba otu ahụhụ na nduku gburugburu ụwa. Ọ bụ onye iro siri ike; ọ bụrụ na a chịkwaghị ya ọ nwere ike belata ihe ọkụkụ, mana ọ nwekwara ike imeghari ngwa ngwa ma wulie ike na njikwa kemịkal.
"Ekwuola ebe a na-eme ka poteto ahụ dị ka ahụhụ dị na mpempe akwụkwọ maka iguzogide - achọpụtara ya ụzọ iji merie imirikiti ụmụ ahụhụ ndị anyị tụbara na ya," ka Bill Moons na-ekwu, onye agronomist na-emepe emepe n'ahịa maka Bayer Crop Science. Ebe ọ bụ na ebuputara ha izizi, ọgwụgwọ mkpụrụ osisi neonicotinoid egosila ụzọ kachasị dị irè iji chebe CPB, mana ndị a na-adịchaghịzi arụ ọrụ n'akụkụ nke mba ahụ, ka ọnwa na-ekwu.
“Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke acres ka na-enweta neonicotinoid n'ihu. Mgbe mbụ e webatara ha, anyị na-enweta ụbọchị nchedo 90-gbakwunyere, mana nke ahụ ruru ụbọchị 50 ruo 60 na mpaghara ụfọdụ, yabụ mkpa maka usoro ọzọ bụ ihe ga-adị mkpa, ”ka ọ na-ekwu. "Anyị na-enwe nsogbu ndị mara mma na Manitoba na akụkụ ụfọdụ nke [Ontario na] Quebec."
Ejikọtara pesti management (IPM) jikọtara ọtụtụ ngwaọrụ - ndu, anụ ahụ na kemịkal - iji belata ihe egwu sitere na pests. N'ihe banyere ijikwa CPB, IPM dị oke egwu. Usoro kachasị mkpa na igbe ọrụ ndị na - emepụta ihe, ọnwa na - ekwu, bụ ntụgharị kemịkal. E wezụga neonicotinoids (Otu 4A), e nwere kemistri sitere n'ọtụtụ ndị ọzọ na ahịa; ndị a na-ejikarị eme ihe bụ ndị otu 5 (spinosyns) na otu 28 (diamides).
Gwakọta ma na-agbanwegharị ụlọ ọgwụ dị oke mkpa iji mee ka ngwaahịa ndị a dị ogologo, mana dịka ihe dị mkpa na-egbochi ịgba ruo mgbe iru ụzọ akụ na ụba ruru, ọ na-ekwu. “Poteto na-amị mkpụrụ mara mma, nwee ọtụtụ osisi vaịn ma nwee ike mebie ụfọdụ. Ọ bụrụ na ndị na-emepụta ihe nwere ike izere ịgba ya, nke ahụ ga-enyere aka mee ka ngwaahịa ndị a dị ogologo. ”
ohn Gavloski bụ onye na-ahụ maka mgbatị maka Manitoba Agriculture and Development Development. N'afọ gara aga, ọ na-ekwu, Manitoba hụrụ obere ihe CPB na July na akụkụ ikpeazụ nke oge uto. “.Fọdụ n'ime ndị a, anyị chere na ha bụ ndị mgbapụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-akọ ihe ahụ nwere ọgwụgwọ mkpụrụ ma ọ bụ tinye ya n'ọrụ," ka ọ na-ekwu. "Enwere ezigbo ihe akaebe na enwe nduku nwere ụfọdụ mgbochi." Ntughari ihe ubi nwere ihe bara uru maka CPB ebe ọ na - eme ka enwe bụrụ “na - agbasi mbọ ike” ka ha chọta mpaghara nduku, Gavloski na - ekwu, n’agbanyeghi na pesti enwere ike ịfegharị n’etiti ubi n’ime okirikiri kilomita anọ.
Akpọwo ebe a na-akpọ poteto ahụ ahụhụ dị ka akwụkwọ ozi maka iguzogide
"Anyị na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha chọọ ma jiri ọnụ ụzọ mee ihe iji gbalịa ibelata foliar spraying," Gavloski na-ekwu. Ọ na-agbakwụnye, poteto nwere ike ịnabata pasent 25 ruo 30 mgbe ha nọ na mpaghara ahịhịa, mana mgbe tubers malitere ịba ụba, nke na-amalite n'oge na-adịghị anya okooko, ha nwere ike ịnabata ihe dịka 10 pasenti. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị elu nwere ike ịhapụ ngwa ngwa ngwa ngwa, a na-etinye ọgwụgwọ mgbe ihe dị ka pasent 10 na-achọpụta. Ngwurugwu CPB gafere okpukpu anọ. Ochie larvae na-akpata ihe dị ka 75 pasent nke mmebi nri. Raygha, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kwesịrị oge maka mgbe larvae ndị kacha ochie nọ n'ọkwa nke atọ (ihe dị ka milimita ise n'ogologo), Gavloski na-ekwu. Okpomoku zuru oke toro ogologo dị ihe dị ka mm asatọ.
Na nso nso a ka ulo oru Bayer bidoro usoro ohuru nke 28 nke erere n’okpuru aha ahia vayego® enwere ike iji ya chịkwaa CPB yana potato beetle na European ọka borer. Ọgbọ nke abụọ nke diamide (tetraniliprole), ngwaahịa a nwere njikwa nchịkwa nke hà ma ọ bụ karịa karịa ngwaahịa ọ bụla na ahịa, Moons na-ekwu. “N’afọ a, anyị ga na-agwa ndị na-akọ nri na ọ bụrụ na ha ejiri neonicotinoid gaa n’ihu, mgbe nchedo ahụ malitere imebi, ha nwere ike ibute ngwaahịa dịka vayego, nke kwesiri inye ha nchedo izu abụọ ma ọ dịkarịa ala. Nke a nwere ike ime ka ha gabiga oge dị oke mkpa nke kụrụ, ”ka ọ na-ekwu.
Iji gbatịkwuo oge iji ngwaahịa a, ọnwa na-ekwu na ndị na-emepụta ga-agbanwe gaa na ngwaahịa 5 nke Group ma ọ bụrụ na achọrọ ngwa foliar nke abụọ, ọ bụ ezie na ngwa nke abụọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa, ebe egosiri na vayego dị irè megide CPB na ọkwa niile. “N’ime ubi ọ bụla, unu nwere ihe ọ bụla site na àkwá ruo n’ihe nke anọ nye ndị okenye. Nke ahụ bụ ihe dị mma na vayego - ị gaghị echegbu onwe gị banyere ịchọta ha na ọkwa uto ụfọdụ, “ka ọ na-ekwu.
Vayego nwere akara ngwa abụọ, mana ọnwa na-ekwu na Bayer anaghị akwado ngwa nke abụọ nke 28 na mpaghara ahụ. "Anyị achọghị ikpochapụ ndị otu 28s," ọ dọrọ aka ná ntị. "Ọ bụrụ na anyị nwere ike bugharia n'etiti neonics, Group 28s na Group 5s, anyị nwere ike ịnwe ezigbo mma ijikwa na ijikwa pesti a na-aga n'ihu." Darin Gibson, onye nyocha nke onwe ya na Gaia Consulting na Manitoba, emeela nchọpụta nkwekọrịta na vayego n'etiti ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ na-akwado na vayego na-egosi na ọ nwere ezigbo ihe fọdụrụnụ ma dị irè megide larvae na ndị okenye.
Gibson na-ekwu na ọ nwere ike ịbụ nsogbu na-anwa ịbawanye njikwa nke ụmụ ahụhụ ma ọ bụrụ na neonicotinoids na-agbaji n'isi oge ahụ-mana ọ dị oke mkpa iji belata ojiji nke kemịkalụ ọ bụla ruo mgbe ha dị oke mkpa. “Oge ụfọdụ ikpere na-ada bụ iche na ọ bụrụ na ị hụ ọnụ ọgụgụ àkwá na larvae na ihe ubi gị mgbe ike gwụrụ gị, ị kwesịrị ịgba, mana ị ga-achọ ichere ruo mgbe ị nwere larvae zuru oke ebe ahụ na-ebuli ngwa gị iji chịkwaa ọtụtụ ụmụ ahụhụ dịka i nwere ike, ”ka ọ na-ekwu. “Nke ahụ nwere ike ịpụta ịnagide ihe.”
nduku akuku nchedo
Agbakwunyere pesti echiche
Bayer si Sivanto® Prime insecticide (Group 4D) na-eleba pests ndị ọzọ na-emebi emebi, gụnyere aphids na akwukwo - ma na-ebelata mmetụta na ụmụ ahụhụ bara uru. The ngwaahịa awade ngwa ngwa knockdown nakwa dị ka mmapụta akara nke iche pests; translaminar ije pụtara pests na underside nke epupụta na-ezubere iche.
Maka ịchịkwa aphids, psyllids na whiteflies, Bayer's Movento® ahụhụ, otu 23 (spirotetramat) onwu, bụ nhọrọ nke na-enye njikwa usoro na mmapụta. Movento na-arụ ọrụ site na igbochi ụmụ ahụhụ ịmị mkpụrụ, nke mechara gbuo ha. N'ihi na Movento dị irè megide aphids, ọ nwekwara ike belata ihe ize ndụ nke nduku virus Y (PVY). Iji ọgwụ ahụhụ ọ bụla kwesịrị ịdabere na mmemme IPM nke gụnyere ịgụ na idekọ ndekọ, ma na-etinye ngwa ọrụ ọ bụla dị mma iji belata nrụgide pesti. Inggbatị ndụ ụmụ ahụhụ dị oke mkpa.
Gibson na-atụ aro ndị na-emepụta ihe iji nwaa itinye nnwale ma ọ bụrụ na ha echee na ha nwere nguzogide ụfọdụ iji belata ọghọm akụ na ụba n'ihi ịgba na-enweghị isi - ọ bụ usoro "ụlọ akwụkwọ ochie", mana ọ nwere ike inye aka. Isi okwu, Gibson na-ekwu, bụ na ndị na-emepụta ihe kwesịrị ime ihe niile ha nwere ike ime iji mee ka ụmụ ahụhụ na-agba ọsọ. “Ihe m na - agwakarị ndị mmadụ bụ na anyị ga - eme ihe ndị dị mfe dịka igbanwe ụmụ ahụhụ na - agbagharị ma na - eme nnwale na nyocha tupu anyị agaghachi na ihe ochie dịka ọkụ, ọkụ na olulu. Anyị achọghị ka anyị laghachi na ndị ahụ, ”ka ọ na-ekwu.
Maka ozi ọzọ, gaa na akuko.bayer.ca/Products/Insecticides/Vayego.
Tacking ahụhụ dị mkpa pests dị ka Colorado nduku ebe
Tags: mgbasa oziBayercolorado nduku ebengwaahịa nchedo ihe ọkụkụeguzogide ọgwụ
Eburu amuma tuber zaa